Weerar Qarax ah oo lala beegsaday Xero Jarmal oo saldhig u ah AMISOM
Sabti, Oktoobar 29, 2011 (Halgan) — Dhalinyaro aad u hubaysan oo ka tirsan cidanka Al-shabaab ayaa ku qaaday weerar loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey walxa qarxa iyagoo sidoo kale qarax ka dib dagaal culus la galay ciidanka AMISOM ee ku sugnaa Xero Jarmal.
Sarkaal ka tirsan Dagaal yahanada ururka Al-shabaab oo saxaafada la hadlay ayaa sheegay in ay iyagu masuul ka yihiin weerarka ayna filayaan in weerarku u dhacay sidii loogu tala galay khasaaro balaarana ay gaarsiiyeen ciidanka AMISOM ee fariisamaha ku lahaa xero Jarmal.
Dhinac kale Afhayeenka ciidanka AMISOM Col. Paddy Ankunda ayaa saxaafada u sheegay in ciidanka Al-shabaab ee weeraray xero Jarmal ay u suuro gashay in ay gudaha u galaan Xerada isagoo sheegay in xerada uu ka dhacay dagaal. Goob jooge ku dhawaa goobta qaraxu iyo dagaalku ka dhacay ee Xero Jarmal ayaa saxaafada u xaqiijiyey in qarax weyn uu ka dhacay gudaha xerada ka dibna dagaal xooggan uu ka bilowday kaas oo weli socda.
Ciidanka AMISOM ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa waxaa dagaal kula jira ciidanka Al-shabaab iyagoo dagaalku uu hadda yeeshay weji kale ka dib markii ciidanka DFKM oo ay taageeraan kuwa AMISOM ay isku baahiyeen xaafadaha magaalada Muqdisho halka ciidanka Al-shabaab ay ciidamadooda u qaybiyeen kooxo yar yar oo qaada weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaq ah, fuliyana weeraro loo adeegsado miinooyinka.